1954-1964 Evinrude 5.5 HP Tune-UP Project Ignition System Tune-Up | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
Imisebenzi ye-Tune Up Up kanye Nezingxenye Zokuthenga
U-Evinrude noJohnson 1979 nangaphambili
ZEPHYR SAIL IZIMPILO
Ngaphambi You Qala
LighTwin Abanikazi Manual
Original Lightwin Izingxenye Manual
Thola Model #
Ingcindezi Okokhelekayo Tank Isexwayiso
Aluminium izikebhe Buyisela
Isivakashi Project Pics
Aluminium Isikebhe Buyisela
Izincwadi - Izincwadi Zokulungisa Izinsiza
Ngena / phuma
1954-1964 Evinrude 5.5 HP Tune-UP Project Ignition System Tune-Up
Ngaphandle kwama-spark plugs nezintambo ze-plug, lonke uhlelo lokushisa lutholakala ngaphansi kwe-flywheel. Uhlobo lwe magneto ukuthungela kule motor kuyinto Ligcina uthi lokuphotha luzungeza Magneto nge Full Amaphuzu. I-OMC isebenzise okufanayo Universal Magneto kuningi lokuphuma kwabo okuncane okuvela kuma-50 kuya phezulu kuze kube muva lapho beqala ukusebenzisa okokukhanya kwe-elekthronikhi. Umsebenzi we uhlelo ukuthungela kuyinto ukukhiqiza ngokwanele voltage (Azungeze 20,000 volts) ukuthi angene phambili igebe use inhlansi plugs, udala inhlansi labahleli basebenta kokhela ingxube fuel / emoyeni, futhi ukuze uqinisekise ukuthi voltage silethwa ipulaki inhlansi ne ncamashi isikhathi esifanele.
Susa ligcina uthi lokuphotha luzungeza Nut - Khulula umuthi we-flywheel. Usebenzisa isokhethi elingu-3/4 intshi noma esinye isikrufu, khipha umuthi we-flywheel. Uzodinga okuthile okuzobamba umugqa omile we-flywheel ukuze ukwazi ukufaka i-torque kunati ngenkathi uphethe iflowwheel ngakho ngeke ijike nenathi. Kunamathuluzi akhethekile alokhu kepha ngisebenzise i- ibhande Ukudonsa ukuthi othile wanginika ngoKhisimusi eminyakeni embalwa edlule. Ngifundile lapho kwesinye isikhathi abantu befaka intambo emgodini we-spark plug ukuze i-piston imiswe ngaphambi kokufika esikhungweni se-Top Dead, ngakho-ke, ubambe i-flywheel endaweni ukuze ukwazi ukususa i-nut. Ngikholwa wukuthi lokhu kungalimaza injini ngaphakathi ngokufaka ingcindezi enkulu kwizinti zokuxhuma. Futhi, ngifunde emabhodini ezingxoxo ukuthi intambo inganqamuka kushiye ucezu lwentambo kusilinda
Zithukulule ligcina uthi lokuphotha luzungeza Nut
Shiya ligcina uthi lokuphotha luzungeza Nut kancane On
.Susa ligcina uthi lokuphotha luzungeza - Kunezindlela ezimbili zokususa i-flywheel, kuya ngamathuluzi onawo. Imishini eminingi izoncoma ukuthi usebenzise i- i-flywheel puller. Ungakwazi ukuqasha Puller amasondo ayo kusukela lakho lendawo ithuluzi sokuqasha esitolo noma ungakwazi ukuthenga i-balancer ye-harmonic. Ukusebenzisa i-puller kuyindlela ephephe kunazo zonke yokuvimbela ukugoba noma ukusonta i-flywheel. Ufuna i-puller enamathela emigodini emithathu yemishudo ku-flywheel ukuyisusa. Ungasebenzisi i-puller edonsela phezulu emaphethelweni angaphandle we-flywheel.
Thepha ligcina uthi lokuphotha luzungeza futhi Phakamisa Cover
Phakamisa ligcina uthi lokuphotha luzungeza Cover
Beka ligcina uthi lokuphotha luzungeza Nut emuva Crankshaft
Old Ignition System
Enye indlela, insimu ethe xaxa yokudonsa iflowwheel ukumane ukhulule umuthi we-flywheel uye lapho uphezudlwana konyawo khona. Ngesikulufini esikhulu sekhanda eliyicaba nesando esithambile, kancane uthepha wehle enhlavini yempukane ngenkathi uthwebula ubheka phezulu onqenqemeni olungezansi lwe-flywheel nge-screwdriver. Qiniseka ukuthi uthwebula ubheka phezulu ku-flywheel uqobo ngokuqinisekisa ukuthi yingxenye ejiyayo hhayi ingxenye emile. Jika i-flywheel 1/4 ijika bese uthepha futhi bese uyiphinda kuze kube yilapho u-flywheel engakakhululeki. I-flywheel kufanele iphume ngemuva kokuthinta ompompi abambalwa futhi ingaphakanyiswa kusuka ku-crankshaft ngemuva kokukhipha i-flywheel nut. Ingozi kule ndlela ukuthi uma uthepha kakhulu ngesando ungaphula i-crankshaft.
Miselela Ignition Izingxenye
Izingxenye ukuthungela itholakala ngaphansi ligcina uthi lokuphotha luzungeza esakhiwa amaphuzu, condensers, nocingo, ezimbili ngayinye ngoba kukhona amasilinda amabili. Ngokuhamba kwesikhathi, lezi zingxenye ziyawohloka futhi zidinga ukushintshwa. Uyabona esithombeni esingezansi ukuthi i-epoxy emboza ama-coil windings iqhekeke ngokuphelele. Le yinkinga ejwayelekile ngezinjini ezindala ze-OMC. Ngaphandle kokufaka enye indawo, noma yimuphi umswakama ozungeze injini uzodala ukuthi amakhoyili abe mafushane noma arc ngaphezulu okuzokwenza ukuthi inhlansi yakho i-spark ingatholi inhlansi enhle ukuze imoto ihambe kahle, ikakhulukazi ngejubane elikhulu. Mhlawumbe ama-9 kwangu-10 kulawa ma-motors akhona namuhla anamakhoyili asesimweni esifanayo nalesi esiboniswe ngezansi. Amakhoyili amasha aphakeme kune-OEM yasekuqaleni ngoba une-epoxy sealer ehlukile engeke ibe nale nkinga. Okusha amaphuzu, condensers, nocingo ziyizinga eliphakeme kakhulu futhi zenza lokho okwangempela. Izingxenye ziyatholakala kabanzi futhi zishibhile.
Kudingeka Ignition Izingxenye
Amakhoyili (udinga okungu-2 kwalokhu) Inombolo Yezingxenye ze-OMC 582995 noma i-584477, iNAPA / iSierra Ingxenye yeNombolo 18-5181
Siza ukusekela le sayithi: Chofoza LAPHA futhi uyithenga on Amazon.com
Ignition Tune-Up Kit Inombolo yengxenye ye-OMC 172522 NAPA / Sierra Ingxenye yeNombolo 18-5006
Champion J6C Spark Imigudu
Spark Imigudu I-champion J6C
Susa Old Amakhoyili - Ikhoyili ngayinye ibanjwa i-phillips eyodwa kanye nezikulufo ezimbili eziqonde ekhanda. Qiniseka ukuthi usebenzisa ama-screwdrivers osayizi afanele kulezi zikulufo ukuze zingonakali. Lapho nje izikulufo sezisusiwe, nqamula izintambo eziphambili eziluhlaza nezimnyama bese uphonsa ucingo lwe-spark plug.
Old Izibuko Amakhoyili
Old Amakhoyili Fell Ngaphandle
Lezi ohlobo ubudala wawa ngokuphelele ngaphandle ngesikhathi senqubo ukususwa.
Susa Amaphuzu emidala Condensers - Susa isiqeshana isamba phezulu okuthunyelwe rocker. Uma isiqeshana isuswe, ungasusa isigamu moveable amaphuzu ngokudonsa it up and off the post rocker.
Full Point Isamba Isiqeshana
Susa epholisayo bese Amaphuzu
Ignition Izingxenye Kukhishwe
Ngokulandelayo, ukususa isigamu-non-moveable amaphuzu. Ungasusi isikulufa sokulungisa. Isikulufu sokulungisa asinamathiseli amaphuzu kupuleti le-stator futhi akufanele sisuswe. Isikulufu sokulungisa yisikulufu esincanyana futhi esikude kakhulu ne-crankshaft futhi singena ngaphakathi kwesikhala esilinganisiwe emaphoyinti. Khipha isikulufa esigcina phansi isisekelo samaphoyinti. Lesi isikulufa esiseduzane ne-crankshaft. Susa isikulufu bese ususa izintambo zekhoyili nezokufuduza ezinamathele emaphoyiseni. Ungasusa ne-condenser.
Susa futhi Hlanza Stator Base - Usebenzisa i-carburetor cleaner, fafaza phansi isisekelo se-stator bese usula uhlanzekile ngendwangu. Uma ucindezele umoya, shaya noma yikuphi okusalile uthuli ne-carburetor cleaner.
Nqamula Isikhathi Advance
Stator Base Kukhishwe
Ngoba manje usune ohlobo yakho, amaphuzu, kanye condensers kususwe kanye isizinda sakho stator eyahlanza, usukulungele reassemble uhlelo ukuthungela ne izingxenye ezintsha.
Hlola Spark Plug izintambo futhi Faka uma Kudingekile - Ngenkathi unesisekelo se-stator sakho, yisikhathi esihle sokuhlola izintambo zakho ze-spark plug nganoma yisiphi isikhathi sokugqoka noma ukugqwala. Ngokwami, imikhawulo yezintambo zami zamapulaki ibonakaliswe ngogwayi ngakho-ke ngabona kuyithuba elihle ukufaka izintambo ze-spark plug esikhundleni. Ngemuva kokuthenga okuningi, ngithole ukuthi izintambo ezijwayelekile ezingama-intshi angama-22 ezithengiswa kwaNAPA bezingezide ngokwanele. Ngilimaze ukuya endaweni ebizwa ngeTrekta Supply futhi ngathenga isethi yezintambo ezine ze-spark plug cishe ngama- $ 4. Qaphela ukuthi kunomehluko phakathi kwezintambo ezindala "eziqinile" ezisetshenziswa ezimotweni zakudala nakuma-motor motors kanye nezintambo ezintsha ze- "carbon core" ezisetshenziswa ezimotweni zanamuhla ezinciphisa ukukhishwa kwe-elekthronikhi okudala ukuphazanyiswa kwemisakazo nokunye okunjalo. Udinga ukufaka izintambo eziqinile eziqinile kulezi zimoto. Ngisebenzisa izintambo ezindala ze-spark plug njengephethini futhi ngivumela ubude obunge-intshi eyodwa, nginqume izintambo ezintsha zaba zide futhi ngazihambisa ngendlela efanayo ezansi kwepuleti le-stator. Angazi ukuthi yini umthetho wokushintsha izintambo ze-spark plug kepha ngibona ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-10, zidinga ukushintshwa! Ngitshelwe ukuthi izindawo eziningi zokulungisa izikebhe notshani zinalolu hlobo lwensimbi eqinile kumaroli amaningi futhi zinganqamula ubude obudingayo, zifake ama-boot caps futhi nginesiqiniseko sokuthi zizosebenza kahle.
Faka, Setha, futhi Hlola Amaphuzu okusha - Uma ufuna ukuthi imoto yakho isebenze kahle, amaphuzu akho kufanele afakwe, asethwe, futhi ahlolwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi ayavula futhi avale ngesikhathi esifanele. Lokhu kunquma ukuthi ama-spark plugs wakho azokhipha nini umlilo, kusetha amandla omlilo ngaphakathi kwamasilinda akho. Uzokwazi ukusho kahle ukuthi amaphuzu akho asethwe kahle ngokuwahlola ngemikhombandlela yokuhlolwa kwezithandani nemitha ye-ohm.
Full Point Test Leade
Okuphakelayo Test Leade Through Stator Base
Yondla umkhawulo owodwa wesivivinyo uholele phansi phansi kwesisekelo se-stator eduze kolunye lwezintambo zakho ze-spark plug. Lokhu kuzosetshenziselwa ukuhlolwa futhi kuzosuswa ngemuva kokuthi amaphuzu alungisiwe futhi ahlolwe. Yondla umkhawulo owodwa wesivivinyo uholele phansi phansi kwesisekelo se-stator eduze kolunye lwezintambo zakho ze-spark plug. Lokhu kuzosetshenziselwa ukuhlolwa futhi kuzosuswa ngemuva kokuthi amaphuzu alungisiwe futhi ahlolwe.
Full Point Base
Full Point Rocker
Intulo Down Full Point Base
Lubricate both rocker posts with the grease provided in your ignition tune up kit. Qiniseka ukuthi ubeka kuphela ijazi elincanyana lamafutha kokuthunyelwe kwe-rocker. Gcoba i-cam ngokubeka inani elincane lamafutha anikezwe amaphuzu emunweni wakho bese uhlikihla ingubo encane kwikham ngenkathi uvula i-crankshaft. Enye indlela elula yokuvula i-crankshaft kule moto ukumane ufinyelele phansi ngesandla esisodwa bese uvula uphephela. Beka uhlangothi olungasuki lwamaphuzu esethi yesikhali ngokulubeka ngaphezulu kwesikulufa sokulungisa bese usibeka kahle ukuze ukwazi ukufaka isikulufa esikhuphukayo. Faka iscrew esikhulayo nesikhiya sokukhiya. Beka uhlangothi olunganyakaziswa lwamaphoyinti amasha asethwe ngaphezu kweposi le-pivot bese ucindezela endaweni. Uzodinga ukucindezela intwasahlobo ukuze ingene ngaphakathi kocezu lwensimbi oluyisicaba. Beka isiqeshana sokugcina kokuthunyelwe kwepivot bese usiqondisa ukuze kuvuleke kude ne-crankshaft. Beka isiqeshana sokugcina intwasahlobo entwasahlobo nocezu lwensimbi oluyisicaba olubamba ukungezwani kwentwasahlobo. Qiniseka ukuthi ubukhazikhazi obuphansi kwalesi siqeshana bukhonjwe kude nengalo yephuli ukuze bungaphazamisi ukuvulwa kwamaphoyinti.
Amafutha Crankshaft Cam nge Molly
Ignition Full Point Cam Top Ukubekwa
Full Point Spring Isamba Isiqeshana
Shintsha i-crankshaft ukuze ibhulokhi lokuhlikihla ingalo lisendaweni ephakeme yekham. Iphuzu eliphakeme kwikham linegama elithi "TOP" eligxivizwe endaweni ephakeme. Usebenzisa igeuger gauge, lungisa igebe libe ngu-.020 intshi ngokuguqula isikulufa sokulungisa. I-feeler gage .020 blade kufanele ikwazi ukulingana kahle phakathi kwamaphoyinti amabili okuxhumana. Akunasidingo sokuchitha isikhathi esiningi ukuthola i-020 gap ngqo. Leli gebe .020 limane nje liyisiqalo ongashintsha kulo njengoba uzobona kule nqubo engezansi. Isiqeshana semikhawulo yokuhlolwa kwakho siye endaweni lapho kuzocijwa khona ikhoyili nentambo ye-condenser kumaphoyinti.
Jikela Crankshaft Cam ukuze Point okuphezulu
Isiqeshana Test Kuholela Ignition Full Point
Indlela elula kodwa ephumelelayo yokuhlola isikhathi sokushisa: Uma ungenaso isibani se-strobe noma i-analyzer ebiza kakhulu yokubheka amaphuzu akho okuphuka, asikho isidingo sokuphuthuma esitolo uyothenga eyodwa. Konke okudingayo ukuze uvivinye isikhathi sakho se-ignition imikhondo emibili yokuhlolwa kwe-alligator kanye nemitha ejwayelekile ye-ohm ukuhlola ukuqhubeka. Akunasidingo sokusebenzisa i-ignition analyzer ngoba zonke izingxenye zakho zokushisa zintsha. Le ndlela izokuvumela ukuthi ulungise isikhathi sakho sokuthungela ngokunemba ngangokunokwenzeka ngemishini yokuhlola ebiza kakhulu. Isikhathi senkinga siphathelene nokuqinisekisa ukuthi amaphuzu akho okuvula ayavula futhi avale ngesikhathi esifanele. Imiyalo egxivizwe ngaphezulu kwe-flywheel nezincwajana zensiza kumane kuthi ukuhlukanisa amaphuzu akho ku-intshi engu -030. Lokhu kungukusondela kuphela futhi kungahle noma kungahle kuholele ekutheni isikhathi sakho sokucekela phansi silungile. Uma uzosebenzisa indlela echazwe ngezansi, isikhathi sakho sizobe sinembile futhi umphumela wokugcina uzoba ukuthi imoto yakho izosebenza ngokushelela futhi iqale kalula.
Susa umuthi we-flywheel bese ubuyisela okwesikhashana i-flywheel emuva ku-crankshaft. Qiniseka ukuthi isikhala esisenkabeni ye-flywheel singena phezu kokhiye we-flywheel futhi i-flywheel ikhiyelwe endaweni. Faka esikhundleni se-flywheel nut ngaphandle kokuyiqinisa. I-flywheel inezinothi zesikhathi esisekelweni sayo. Kunezinothi ezimbili ezinhlangothini eziphambene ze-flywheel, eyodwa ngeqoqo ngalinye lamaphuzu. Inotch enkulu izoba ngeyesilinda inombolo eyodwa kanti notch omncane ohlangothini oluphambene ngeyesilinda inombolo yesibili. Thatha ipeni lokumaka le-Sharpie bese uqokomisa lezi zimaki ukuze zibonakale kalula.
Ligcina uthi lokuphotha luzungeza Isikhathi Mark
Ignition Isikhathi Test
Timing Test Bad
Xhuma ukuphela kokuvivinywa kokuhlolwa kwakho kokunye kokuhola kumitha yakho ye-ohm. Xhuma okunye ukuhola kwe-ohmmeter yakho emhlabathini ngomunye umholi wokuhlola. Njengoba uzungezisa ifwwashi lakho ngokwewashi, bukela uphawu lwesikhathi njengoba lusondela kumamaki amabili esisekelweni sezikhali. Uphawu ku-flywheel kufanele luhambe ukusuka kwesokudla uye kwesobunxele njengoba uzungezisa i-flywheel. Lapho uphawu lwesikhathi ku-flywheel luphakathi kwamamaki amabili epuleti lezikhali, amaphuzu kufanele avuleke futhi imitha ye-ohm izoshintsha isuke ku-0 iye kuma-ohms angenamkhawulo. Kulolu hlobo lokushisa kwe-magneto, i-plug plug izokhipha lapho amaphuzu evuleka.
Uma igebe kumaphoyinti lincane kakhulu, amaphuzu azovuleka sekwedlule isikhathi noma ngemuva kokuthi uphawu lwesikhathi ludlulise amamaki kusisekelo sezikhali. Uma igebe emaphoyinti libanzi kakhulu, amaphuzu azovulwa ngaphambi kwesikhathi noma ngaphambi kokuthi uphawu lwesikhathi lufinyelele kumamaki esisekelweni sezikhali. Le moto inekhava encane yensimbi ngaphezulu kwe-flywheel ongayisusa futhi ufinyelele kwizikulufo zokulungisa igebe ukuvula noma ukuvala igebe emaphoyinti. Yenza ushintsho oluncane esikulingweni sokulungiswa kwegebe uze uthole amaphuzu ukuthi avuleke lapho uphawu lwesikhathi luphakathi kwamamaki amabili esisekelweni sezikhali.
Manje faka, setha, bese uvivinya isethi yesibili yamaphoyinti, ngaphandle kwalesi sikhathi, uzosebenzisa uphawu lwesikhathi oluncane kolunye uhlangothi lwendiza. Futhi, ungeqa ukuthambisa kwekham ne-rocker post okwenze ngesethi yokuqala yamaphoyinti okuphula.
Hlola okusha Amakhoyili - Ungacabangi ukuthi amakhoyili amasha owathengile alungile. Usebenzisa i-Ohmmeter noma Diode Ukuqhubeka Checker hlola ukuqhubeka kokushaywa kwamakhoyili okuyinhloko. Kufanele kube nokuqhubeka phakathi kwe- Green futhi Black imikhondo. Kufanele kube nokumelana okungaba ngu- .9 ohm phakathi kwe- Green futhi Black kuholela.
Hlola Ignition Ikhoyili Primary Windings
Hlola Ignition Ikhoyili Secondary Windings
Faka okusha Amakhoyili futhi Condensers
Beka inani elincane abicah kwakwakhe emgodini ngoba isixhumi inhlansi ipulaki. Lokhu akulona uhlobo abicah oyisebenzisa seal ubhavu yakho. Lolu hlobo abicah sealer akusho lukhuni. Usebenzela ekugcineni umswakama aphume uxhumano lwakho kagesi. Ungathenga lokhu abicah sealer ngasiphi Radio Shack noma izinto zikagesi. Shelelisela inhlansi ipulaki wire amabhuzu ungene inhlansi ipulaki kwakho ngezintambo.
Beka Silicone ku Ikhoyili futhi Spark Plug nezixhumi
Beka ikhoyili ezintsha ungene base armature.
Isikulufa lamakhoyili ohlobo entsha ungene base armature.
Intambo ye-spark plug ixhunywe kwikhoyili ngokuyishutheka kuphini elinezintambo. Ungahle udinge ukukhulula isikulufa esiphethe intambo ye-spark plug ukuze ube nokuvilapha okwanele ukukuphonsa kusixhumi. Sula ipulagi kusixhumi sayo bese uslayida ibhuthi phezu kwesixhumi. Lokhu kufanele kunikeze ngophawu oluhle olungangeni manzi lwalolu xhumo. Zungezisa ikhoyili endaweni uqondanise izimbobo zesikulufa. Qinisa isikulufa esiphethe izintambo ze-spark plug ohlangothini olungezansi kwepuleti lesikhali.
Ucingo olumnyama lwekhoyili lusekelwa ngokuluxhuma ku-screw coil mounting ekude kakhulu namaphoyinti. Izithombe ezingenhla zikhombisa indlela engalungile nelungile yokuhambisa lolu cingo lomhlabathi wekhoyili. Ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi zonke izintambo ziboshwe kahle ukuze zingathinti noma yiziphi izingxenye ezihambayo. Endabeni yale khoyili, ngafaka ucingo olumnyama ngemuva kwesikulufu sokuphakamisa ikhanda sePhillips. Futhi, ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi azikho izintambo ezicindezelwayo futhi zine-slack encane ngakho-ke ngeke zibeke ingcindezi kuzixhumi zazo.
ikhoyili Isikhundla ukuze akavele base esidlule.
Ngaphambi kokuthi uqinise izikulufo ezikhuphukayo, qiniseka ukuthi uzibuthe wekhoyili awudluli udlule ibhlokhi ebekiwe engxenyeni yesikhali. Uma ikhoyili ibekiwe ngakho-ke uzibuthe udlula ngale kwalesi sisekelo, uzibuthe wekhoyili uzothinta ingaphakathi langaphakathi lefreyimu.
Xhuma izintambo ukuze full amaphuzu.
Isikhundla epholisayo entsha ku isizinda armature.
Isikulufa ikhoyili epholisayo wire full amaphuzu.
Xhuma ngokukhululekile intambo yekhoyili eluhlaza kanye nocingo olumnyama lwe-condenser emaphoyinti. Khweza i-condenser uye phansi ngesikulufu sayo esikhulayo. Qinisa isikulufu sokubamba i-condenser nocingo lwekhoyili. Qaphela ukuthi ungasiqinisi ngokweqile lesi sikulufa noma ucindezele amaphuzu ngoba lokhu kungaphazamisa amaphuzu akho ahlelisiwe.
New uhlelo magnedo ukuthungela.
Yakho esiphelile Ignition System kumele ibukeke lokhu.
Qinisa ligcina uthi lokuphotha luzungeza Nut
Buyisela ligcina uthi lokuphotha luzungeza futhi kahle ekupheleni qinisa nut ligcina uthi lokuphotha luzungeza. Uma une ukusonta torque, torque nut ligcina uthi lokuphotha luzungeza ukuba mayelana 45 unyawo amakhilogremu.
Hlolela i-Spark - Susa inhlansi plugs ubudala. Ukusebenzisa i-pair yama impintshisi inaliti-ekhaleni, qondanisa ekupheleni inhlansi plugs ubudala futhi ukuxhuma futhi plugs ubudala kuzintambo yabo. Njengoba ephethe kumila inhlansi plugs ubudala kuya phansi, ukushintshanisa ngokwewashi ligcina uthi lokuphotha luzungeza ngesandla noma ngokuvula nut ligcina uthi lokuphotha luzungeza nge ukusonta. Kufanele ubone inhlansi enempilo jumping igebe ka Imigudu zakho ezindala.
Gap bese Ufaka okusha Spark Imigudu - Ukusebenzisa gauge ukudluliselwa, ulungise igebe inhlansi yakho entsha plugs ukuze .030 intshi. Plugs entsha ngeke uphume ebhokisini ukuvala igebe elifanele kanye igebe plugs yinqubo elula ukuthi zivame ukunganakwa. Uma ungenayo i-ithuluzi esikhethekile ukulungisa igebe inhlansi ipulaki, ungasebenzisa blade ummese lokwanuleka igebe noma kancane badonsa ukuphela sivale okuthile okunzima sivale igebe elikhona. Faka entsha inhlansi plugs futhi uhlelo lwakho ukuthungela kuyinto ubukele-up.
Ukucinga Le Site
Khetha ukuhumusha kolimi
Khetha UlimiisiZuluAfrikaansAlbanianArabic-ArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoIsiShayina (Esenziwe Lula)IsiShayina (Esivamile)CroatianCzechDanishDutchEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiCreole HaitianHausaHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseisi-JavaneseKannadaKhmerKoreanLaoLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseMaoriMarathi-MongolianNepaliNorwegianPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianwaseSomaliSpanishSwahiliSwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddishYorubaZulu
Siza Ukusekela Le Site
Sicela uchofoze izixhumanisi ezingenhla ngaphambi kokuthenga Amazon or EBay. Abathengi Bomhlaba Wonke Bayamukelwa
Abaxhasi be-Evinrude Johnson Suzuki Outboard ne-Stern Drayivu
I-Aluminium nensimbi engagqwali
Shayela Izikhonkwane ze-Shear
Umhlahlandlela Wokukhetha we-BRP
I-Michigan Wheel Propeller Catalogue Yazo Zonke Imikhiqizo
I-Champion Spark Plugs
I-Find Champion Finder Parts
I-Spark Plug Cross Reference
I-2020 Sierra Marine Catalogue
I-2020 Sierra Marine Parts Catalog
I-2019 Sierra Marine Parts Catalog
I-2018 Sierra Marine Parts Catalog
(2018 kulula ukuyisebenzisa kune-2019)
I-2019 Sierra BoatBuilder Catalog
Ikhathalogi ye-2020 Michigan Wheel Propeller
akhawunti imenyu Umsebenzisi
Theme by Danetsoft futhi Danang Probo Sayekti liphefumulelwe Maksimer